Vaovao - KF932 KF86 Relay Tester dia nandalo ny fanaraha-maso nasionaly
KF932 KF86 Relay Tester dia nandalo ny fanaraha-maso nasionaly
Tamin'ny 19 Oktobra 2020 teo fotsiny,
Ny KFINE vaovao vaovao an'ny KINGSINE IEC61850-Tester &
Nandalo ny karazana fitsapana
Nosoratan'ny National Power Transmission Distribution Security Control Equipment Quality Supervision Inspection Center
Ary Ivotoerana fanamarinana andrana andrana momba ny andrimpanjakana, Grid Electric Power Research Institute,
Araka ny fenitry ny fizahana ny
DL / T-624-2010 ny fepetra famantaran-tena momba ny Relay Protection Microcomputer &
DL / T-1944-2018 sombin-tsolika marani-tsaina fitaovana fanandramana signal digital digital
DL / T-1501-2016 fitaovana fitsapana fampitaovana digital relay
Izay mahazo ny fahitana iraisam-pirenena eken'ny CNAS-L1379 & PAL & ilac-MRA.
Ny KF932 tànana IEC61850 Testier dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fampandehanana ireo rafitra herinaratra azo antoka sy azo antoka. Izy io dia fitaovana fanandramana ampiasaina amin'ny sehatry ny fiarovana ny fiarovana amin'ny microcomputer, ny fiarovana ny relay, ny fandrefesana ny hafaliana ary ny fandraisam-peo.
4.3 'Touch efijery sy ny keypad, hihaona amin'ny fampiasana fanao isan-karazany.
Kely habe, ≤0.75kg lanjany mora entina.
KF86 Compact IEC61850 6-phase relay test napetraka miaraka amin'ny vahaolana avo lenta sy vahaolana feno (manaraka ny lanjan'ny santionany IEC61850 sy GOose), afaka mahafeno tanteraka ny fepetra takiana amin'ny detection sy debugging an'ny IEC61850 IEDs, merge Units, ny rafitra fanaraha-maso ny station ary ny relay fiarovana nentim-paharazana.
Seranan-tsambo optika 8 manaraka ny sandan'ny santionany IEC61850 sy ny GOose;
Volta 6x130V sy 6x20A fantsona analog ankehitriny avo lenta;
GPS inbuilt, tohizo ny fiasa fampifanarahana IRIG-B;
9.7 inch touch screen & 10kg lanjan'ny mora miasa ivelan'ny Internet na amin'ny laptop;
KINGSINE R&D dia ekipa matihanina kokoa, izay misy Post-Doctor, Doctor, Masters ary manam-pahaizana amin'ny indostria.
Ny ekipa KINGSINE R&D dia namolavola tsy tapaka ny vokatra manavao ny fampandrosoana varotra mety, toy ny Universal Relay Tester K3163i, Engybrick Power monitoring Solution amin'ny fametrahana mora sy sns.
Kingsine koa dia manana ireo teknisianina matanjaka sy manam-pahaizana ary mahay manome vahaolana fitsapana herinaratra mifanaraka amin'ny filazan'ny mpanjifa.
Miaraka amin'ny hevitra famolavolana All-in-One noforoniny sy patanty maro, ny vokatra KINGSINE dia nankatoavina tsara ary natolotr'i China National Institute of Metrology sy andrim-pikarohana angovo isaky ny faritany ary koa ny mari-pahaizana CE.
Fitsapana fampitàna an-tsokosoko, Fitsapana fampitana mivantana, Fiarovana Relay Tester, Fitsapana fampitana, Fitsapana fampitana niomerika, Fitsapana fampitàna lavitra, Vokatra rehetra